Araka ny filazan'i Gurman, ny iMac sy Mac mini nohavaozina dia ho tonga amin'ny 2022 | Avy amin'ny mac aho
Araka ny voalazan'i Gurman, ho tonga amin'ny 2022 ilay iMac sy Mac mini nohavaozina
Dimy andro no lasa hatramin'ny namoahan'i Apple ny MacBook Pro vaovao ary fitaovana hafa. Solosaina finday sasany izay hahafaly ny mpampiasa noho ireo chips M1 Pro sy Max vaovao. Dimy andro taty aoriana dia nisy tsaho voalohany momba ireo fitaovana tsy hitanay tamin'io hetsika io tamin'ny alatsinainy: Mac mini sy iMac. Nilaza izy ireo fa ho avy amin'ny taona ho avy.
Araka an'i Mark Gurman avy ao Bloomberg ao amin'ny bilaoginy manokana, milaza fa amin'ny herintaona dia ho hitantsika ny fahatongavan'ilay maodely Mac mini sy iMac vaovao. Fa amin'ity taona ity dia efa nahatanteraka i Apple. Marina fa tamin'ny taon-dasa dia nanangana hetsika telo ny orinasa amerikana, ka ny roa tamin'izy ireo no tena narahina. Na izany aza dia izany no nitranga noho ny fahatarana ny fitaovan'ny fitaovana sasany noho ny COVID-19. Amin'ity taona ity dia hafa ny zavatra ary Hisy ireo hetsika roa efa hitantsika ireo ihany.
Amin'izany fomba izany ny fanavaozana ny iPad Pro sy ny solosaina desktop, iMac sy Mac mini dia tsy maintsy miandry hatramin'ny taona manaraka. Amin'ny 2022 dia afaka mahita iMac vaovao miaraka amin'ireo processeur M1 ankehitriny isika. Amin'ity tranga ity dia mety ho ny M1Pro na M1 Max, saingy azo antoka fa saika tsy ho vita mihitsy ny mahita solosaina vaovao efa misy M1 ary tsy dia misy loatra amin'ny Intel. Izany no mahatonga na i Gurman aza sahy maminavina fa ny MacBook Air manaraka dia ho avy miaraka amin'ny processeur Apple Silicon sy ny chip manaraka.
Tsara tarehy manokana fa raha mandefa ny Mac mini vaovao i Apple, dia ho maro loko toy ny iMac ankehitriny izy ireo.
Tsy hanantena hetsika fahatelo amin'ity taona ity aho na fanambarana lehibe hafa. Apple dia nanao hetsika telo tamin'ny taon-dasa satria ny Covid-19 dia niteraka fahatarana ary nanelingelina ny kalandrie. Raha manana Mac maro kokoa i Apple amin'ity taona ity, dia nanambara azy ireo tamin'ny herinandro lasa, na dia tsy handefa aza izy ireo hatramin'ny faran'ity taona ity. Tena tsy misy zavatra hafa sisa amin'ny tondrozotra izay vonona amin'ny 2021.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Araka ny voalazan'i Gurman, ho tonga amin'ny 2022 ilay iMac sy Mac mini nohavaozina
MacBook Pro M1 sy M1 Max mahery, fahatongavan'i macOS Monterey, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro amin'ny I'm from Mac
Ny sasany heverina ho sary voalohany amin'ny AirPods Pro 2 dia miseho